15 Elifaz onye Timan wee zaa, sị: 2 “Onye maara ihe ọ̀ ga-eji ihe ọmụma na-enweghị isi na-asa okwu,+Ka ọ̀ ga-eme ka ime afọ ya jupụta n’ifufe si n’ebe ọwụwa anyanwụ?+ 3 Ịba naanị mba agaghị aba uru ọ bụla,Okwu ọnụ efu enweghịkwa uru ọ ga-aba. 4 Otú ọ dị, gị onwe gị na-eme ka ịtụ egwu Chineke ghọọ ihe efu,Ị na-emekwa ka ịtụgharị uche banyere Chineke ghara inwe ihe ọ bụ. 5 N’ihi na njehie gị na-akụziri ọnụ gị ihe,Ọ bụkwa ire ndị aghụghọ ka ị họọrọ. 6 Ọnụ gị na-akpọ gị onye ajọ omume, ọ bụghị m;Egbugbere ọnụ gị na-emegide gị.+ 7 Ọ̀ bụ gị bụ mmadụ mbụ a mụrụ,+Ka è tinyere oké mgbalị mụọ gị tupu a mụọ ugwu?+ 8 Ị̀ na-anụ okwu nzuzo nke Chineke,+Ka ì chere na ọ bụ naanị gị nwere amamihe? 9 Gịnịdị ka ị ma nke anyị na-amaghị?+Gịnị ka ị ghọtara nke anyị na-aghọtaghị? 10 Onye isi awọ́ na onye agadi nọ n’etiti anyị,+Bụ́ ndị dịworo ogologo ndụ karịa nna gị. 11 Ngụgụ obi Chineke ó zughịrị gị,Ma ọ bụkwanụ okwu e ji nwayọọ gwa gị? 12 Gịnị mere obi gị ji arafu gị,Gịnịkwa mere i ji na-achakasị anya? 13 N’ihi na ị na-eme ka mmụọ gị megide Chineke,I mewokwa ka okwu si n’ọnụ gị na-apụta. 14 Gịnị ka mmadụ efu bụ nke mere ọ ga-eji dị ọcha?+Ma ọ bụ onye ọ bụla nwaanyị mụrụ nke mere ọ ga-eji bụrụ onye ziri ezi? 15 Lee! Ọ tụkwasịghị ndị nsọ ya obi,+Eluigwe adịghịkwa ọcha n’anya ya,+ 16 Ma ya fọdụzie mgbe mmadụ bụ onye a na-asọ oyi, bụrụkwa onye rụrụ arụ,+Onye na-aṅụ ajọ omume dị ka mmiri! 17 M ga-agwa gị ya. Gee m ntị!+Ahụwo m nke a, ya mere, ka m kọọ ya, 18 Ya bụ, ihe ndị maara ihe+ na-akọ,Nke ha na-ezoghịkwa ezo, ebe o si n’ọnụ ndị nna ha. 19 Ọ bụ naanị ha ka e nyere ala,Ọ dịghị onye bịara abịa nke si n’etiti ha gafere. 20 Onye ajọ omume na-ata ahụhụ ụbọchị ndụ ya niile,Otú ahụ ka ọ dịkwa ọbụna onye na-achị n’aka ike n’afọ niile dịịrị ya. 21 O ji ntị ya anụ ụda ihe na-emenye ụjọ;N’oge udo, onye na-ebukọrọ ihe mmadụ na-awakpo ya.+ 22 O kwetaghị na ya ga-esi n’ọchịchịrị pụtaghachi,+Ọ ga-alakwa ná mma agha. 23 Ọ na-awagharị na-achọ ihe oriri—ọ̀ dịkwanụ ebee?+Ọ maara nke ọma na ụbọchị ọchịchịrị+ ga-agbachibido ya dị nso. 24 Ahụhụ na nhụjuanya na-emenye ya ụjọ;+Ha na-abịakwasị ya dị ka eze nke dị njikere ibu agha. 25 N’ihi na ọ na-esetị aka ya megide Chineke,Ọ na-anwakwa igosi na ya ka Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ike;+ 26 N’ihi na o ji ikwesi olu ike na-emegide ya,Buru ọta dị ikputu; 27 N’ihi na o ji abụba kpuchie ihu ya,Maakwa abụba n’úkwù ya,+ 28 O bi n’obodo ndị a ga-ekpochapụ ekpochapụ;N’ụlọ ndị mmadụ na-agaghị ebigide na ha,Bụ́ ndị a kara aka na ha ga-aghọ ikpo nkume. 29 Ọ gaghị aba ọgaranya, akụ̀ ya agaghịkwa amụba,Ọ gaghịkwa eme ka ihe ndị ha nwetara gbasaa n’elu ụwa.+ 30 Ọ gaghị esi n’ọchịchịrị wezụga onwe ya;Ire ọkụ ga-eme ka ome ya kpọnwụọ,Ikuku nke si Chineke n’ọnụ ga-ala ya n’iyi.+ 31 Ya atụkwasịla obi n’ihe efu, e wee duhie ya,N’ihi na ọ bụ naanị ihe efu ka ọ ga-enweta dị ka ụgwọ ọrụ; 32 Ọ ga-emezu tupu ụbọchị ndụ ya agwụ.Alaka ya agaghịkwa ama pokopoko.+ 33 Dị ka osisi vaịn, mkpụrụ ya na-achaghị acha ga-adapụsị,Dịkwa ka osisi oliv, ifuru ya ga-adasịsị. 34 N’ihi na nzukọ nke ndị si n’ezi ofufe dapụ tọgbọrọ n’efu,+Ọkụ ga-eripịakwa ụlọikwuu nke iri ngarị.+ 35 Nsogbu ka ha na-atụrụ ime ya, na-amụpụtakwa ihe ọjọọ,+Afọ ha na-akwadebekwa aghụghọ.”